CBS Yese Yekuwana Yevadzidzi Discount (2020) - Bata Izvozvi! - Varaidzo
Ungawana Sei CBS All Kuwana Yevadzidzi Discount?
Zvinoenderana webhusaiti yeCBS, iyo CBS All Access ichapa zvikwereti zvemudzidzi zvinokupa iwe 25% kubva pamabhiri ako emwedzi. Iyi dhisikaundi inoshanda kune iyo 'shoma Commerce' sarudzo. Nekudaro, izvo zvinoreva kuti vadzidzi vari kuzogashira kuyerera kweCBS mumitengo yakadzikiswa kuti vatarise yavo ye-inoda-kuratidzwa ine mhenyu TV iyo inosanganisira Big mukoma, NFL, uye zvimwe zvakawanda.
Vadzidzi vanobhadhara $ 5.99 pamwedzi yeCBS All Access Streaming masevhisi ikozvino vanowana mutero uye vanobhadhara $ 4.50 pamwedzi pamabasa ekunyorera. Kutendeseka, ichi chingave chakanakisa mutengo wakanaka wevadzidzi vekoreji.
Nezve CBS ZVEKUSVIRA Kwevadzidzi Discount:
Iyo CBS All Access iri zvakare inozivikanwa inozivikanwa vhidhiyo yekushambadzira sevhisi inopihwa neCBS. Iyi sevhisi yekushambadzira ine yayo katarogu yezviuru zveanorarama TV show ayo anomhanya mukati megore Sezvineiwo, mhenyu yeTV sarudzo inokutendera iwe kuti uwane PGA Tour, NCAA makwikwi, uye zvimwe zvakawanda zviitiko zvepamitambo.
Pamwe chete neizvi, iwe unogona zvakare kutarisa chaunofarira terevhizheni pa-kudiwa uye mhenyu inoratidza zvakare. Zvirongwa zveCBS zvinosanganisira Mudiki Sheldon, Iyo Big Bang Dzidziso, Murume ane chirongwa, NCIS, uye maviri anozivikanwa epakutanga CBS All Access inoratidza, Star Trek: Discovery uye Iyo Yakanaka Hondo. Pamusoro peizvi, kutenderera uku kune zvakare nezvirongwa zvekare senge Pasi peDome neJeriko.
Inonzwika Mazuva makumi matatu Yemahara Muedzo
Yakanakisa VPN yeMotoStick
Izvo Iwe zvaunowana pane Yevadzidzi Discount kuCBS All Access?
Kudzikisira kwevadzidzi kunokutendera kuti uve nehurongwa 'hushoma hwekutengesa' zvinoreva kuti unenge uchingova neshambadziro dzeapo neapo uchiona ako ekuda-kuratidza. Iyo 25% CBS Yese-yekuwana mudzidzi dhisikaundi inogona chete kunyorera kune yakashomeka vhezheni vhezheni asi kwete yehara yemahara vhezheni.
Kuti uwane iyi dhisikaundi, iwe unofanirwa kusaina iyo CBS All Access mudzidzi dhisikaundi nekoreji yako iri kana .edu email kero.
Izvi zvinodaro nekuti kana iwe ukasaina neyako koreji id, iyo CBS All Access inoziva kuti iwe uri wakanyoreswa koreji mudzidzi. Mushure mekusaina-kumusoro maitiro, CBS All Access inoita kuti uburitse nhepfenyuro pamambure avo ayo anotendera iwe kutepfenyura maratidziro ehupenyu uye zvimwe zviitiko.
1. Rarama Mitambo
Iyo CBS All Access yemudzidzi dhisikaundi inokupa iwe mukana kune yemitambo mhenyu iyo inosanganisira mhenyu PGA kutenderera, mitambo yeNFL, NCAA makwikwi, uye zvimwe zvakawanda zviitiko zvemitambo. Zvakare, iwe unowana mukana wekutarisa kunze kunoratidza kungave kurarama kana pane-kudiwa. Saka, unogona kunakidzwa nemitambo yako chero nguva.
2. Yakasarudzika Yekutanga CBS Series
CBS zvakare inokupa iwe mukana weazvino ekutanga eBSS akateedzana iwe aunogona kupotsa kumwe kunhu. Sir Patrick Stewart achakurumidza kukukanganisa nebasa rake rine mukurumbira munhevedzano inotevera saJean-Luc Picard.
Usakanganwa kutarisa mwaka wechipiri we Star Trek: Discovery. Chengetedza ziso rako paKevin Williamson, Ndiudze Nyaya. Imwe Dhora, Ngano Ngano, Ngirozi Dzinoshamisa dzinokupa iwe zvakawanda uye zvinoshamisika panguva ino.
3. Big Mukoma
Big Mukoma, iyo inonyanya kuzivikanwa chaiyo inoratidza uye yakanyanya kurohwa muTv nhoroondo. Vanhu vanomirira nemwoyo wese mwaka kuti vaone avo vavanofarira vane mukurumbira vachikiya mumba kwemwedzi mitatu. Iye zvino unogona kuwana mukana weiyi show pazvidzidzi zvevadzidzi zvinowedzera kuwedzera varaidzo yako.
Eya, izvi zvese zvinongova zvikwambo zvatinoonesa nezvezviratidziro zvega zvauchazowana kuCBS All Access yemudzidzi. Mushure mekusainira kushambadzira kwemudzidzi, unogona kuwana dzakasiyana siyana bhezheni yeTV uye inouya CBS mwaka unouya uye nyeredzi dzemitambo dzinodiwa uye vanozivikanwa vezvino.
Saka, usagara uye kurumidza! Saina kusaina muiyo CBS saiti, tora yako dhisikaundi, uye unakirwe kutenderera uye yemahara kuyedza masevhisi kuti uone ako aunofarira mashoo.
Zvimwe Zvidimbu Zvevadzidzi Zvipo Zvaunofanira Kuongorora:
Hulu Mudzidzi Discount
Apple Music Mudzidzi Discount (2020)
Voicemod Pro Ongororo - Izvi Zvakachengeteka Kushandisa Here?
Yakanakisa webhusaiti yekutarisa emahara terevhizheni
ndinogona kuona emahara emafirimu online
mafirimu ekupedzisira ekuona emahara
tarisa bhaisikopo online mahara
Ndingawanepi mahara maTV epachena
husiku hwakatangira kuzadza bhaisikopo